Faallo: Daan-daansiga Ereteria, Dulqaadka Somaliland, Iyo Sooyaalka Tariikheed ee geeska Afrika « SAWNEWS NETWORK
« ”Soo Guryo Noqoshada M/weyne Rayaale Iyo Natiijadii Socdaalkiisa Kuwait” Shir Jaraa’id
Ogaysiis :- 2009 3rd ARDAA CONVENTION »
Faallo: Daan-daansiga Ereteria, Dulqaadka Somaliland, Iyo Sooyaalka Tariikheed ee geeska Afrika
Posted by Sawnews.tk on June 24, 2009
Wadamada ku yaal waqooyi bari ee qaarada Africa ama loo yaqaan Geeska Africa , waxay ka kooban yihiin todoba (7) wadan ee la isku yidhaadho IGAD oo kala ah Somalia , Jabouti , Ereteria , Ethiopia , Sudan , Uganda , Kenya . Waxa ku nool Geeska Africa qiyaas ahaan dad lagu cadadey 187.97 million iyadoo tirade korodhka dadku uu yahay sanadkiiba 2.6%.
Geeska Africa wuxuu ku fadhiyaa dhul cabirkuusu dhan yahay 4 , 04968 km sq . oo macnaheedu tahay in 22 Km sq ba ay ku nool yihiin dad cadadkoodu dhan yahay 1000 qofood hasayeeshee xaqiiqdu sidasi way ka duwantahay waayo dhulku intiisa badan ma aha meel dhamays tiri karta nolosha dadka , sidaas darteed dadku waxa ay ku nool yihiin dhul aad u yar gudihii . Waxa taasi garab socota in dhulka beerashada ku wacani uu yahay kaliya 7.2% oo u dhiganta 290352.4 km sq.
Gobalka geeska Africa laga soo bilaabo dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka ilaa manta waxa uu ku jira xaalad xasilooni dara ah , oo ka dhashay dagaalo iyo isku dhacyo siyaasadeed udhaxeeyo wadamada dariska ah ama shucuubta kala gadisan ee Afrikaanka ah ee ku hoos nool wadamaas . Is raac raacinta qoomiyadaha Geeska Africa iyo inta badan ka dhashay kala qaybintii ay sameeyeen gumaystihii reer Yurub. Colaadaha joogtada ah ee ay sobobeen xasilooni la aanta siyaasadeed ee ka jirta guud ahaan Africa gaar ahaana G. Africa a ayaa wuxuu sobobay dhibaatooyin fara badan oo saameeyay duunyo , duur jog iyo deegaanka intiisa kalaba. Dagaalkii sokeeye ee 1waad iyo kii 2aad ee ka dhacay suudaan marka la isku daro waxa ku nafwaayay dadwayna fara badan tiri intaasi ka badana way ku barakaceen. Qaytii koowaad ee dagaal sokeeye ee suudaan ee dhacay 1955-1972 gii oo qudha ayaa waxa ku nef waayay dad lagu qiyaasay 500 , 000 ruux . Malaayiin kalana way ku barakaceen. Sidoo kale dagaalkii Ogaden War ee 1977-78 isagana waxa ku naf waayay kumanaan ruux , tiro lagu qiyaaso 600 ,000 ilaa 800 , 000 way ku barakaceen. Dagaalkii xoriyad raadinta jabuuti ayaa isna laftiisu dhibtiisa lahaa.
Marka aanu uyara leexano xaga beesha caalamaka , sida lawada ogsoonyahay nidaamka dawladnimo ee casriga ah ee hada ka jira dunida wax uu ka dhashay heshiiskii West phalia sanadkii 1648 . Wuxuuna soo afjaray heshiiskaasi dagaal 30 sano ka socday Yurub , isalamarkaasna markii ugu horaysay qalinka lagu duugay in dawladuhu ay is aqoonsadaan , oo aan dawladna dawlad soo fara galin(Sovereignty) .
Jiritaanka dawladaha caynkaas ah waxa loo shardi yeelaa sedex qodob oo aasaasi ah
1- In dawladu ay maamusho dhulka ay ka taliso ( Impirical sovereingty )
2- In dawlaha kale ay aqoonsadaan in dalkaasi yahay mid madax bananaan ( juridical sovereignty)
3- In dadwaynaha dagan dalkaas ay ka dhaxayso qiyam ay wadaagaan sida luqada ay ku hadlaan , dhaqanka iyo diinta ( Social cohesion ) ayna sidaas ku aaminaan in dawaldu ay tahay mid ay iyagu leeyihiin.
Taariikhda Yurub waxa soo martay dagaalo diimeed oo lagu hoobtay sida kii dhex maray Protestans- Cathalic wixii ka horeeyay sanadkii 1648kii . Sidaas awgeed ayaa la yidhaah waqtigaas ayaa ugu horaysay dawladnimo wadamada reer galbeedka. Waxaanse ognahay in islaamku mudo 7qarni ah uu hogaaminaya caalamka , taasoo ku eekayd 1258kii oo markii Tartarisku qabsadeen Baqdad.
Bal aanu usoo miiq siibano xagan iyo Somaliland . Somaliland waa dal wayn oo barwaaqa ah , lehna taariikh iyo soo yaal fac wayn . Somalind waxay xornimda qaatay 1960 ka hor intii ayna la midoobin koonfurta Soomaliya . Ka dib markii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaliya Somaliland waxay dib ula soo noqotay xornimadeedii 1991.
Somaliland waa dal ay ka jirto dumuqraadiyada iyo xasalooni mid siyaasadeed iyo mid nabad galyaba, Somaliland waxay ka mid tahay dalalka fara ku turiska ah ee laga helay dad isku af diin iyo dhaqan intaba ah , taasina waa calaamad mihiim u ah in ay dawlad noqon karto marka aan ufiirino sharciyada aan kasoo hadalnay.
Dalalka Africa sida Itoobiya Kiiniya iyo dalal badan oo ay ku nool yihiin qoomiyadu aan shaqo isku lahayni sidey ku noqdeed dawlad , Somaliland na ay ku noqon wayday ? Akhriste su aashaasi waa mid aad is waydiin karto marka aad dhuuxdo sharciyada aan kaga soo hadalnay oogada sare ee maqaalka. Waxa kaloo wax lala yaaba ah sida ay beesha caalamku dhagaha uga furaysatay horumarka iyo dimuqraadiyada ka socoto Somaliland , iyo sida ay Somaliland ugu samrayso dhibaatooyinkasta oo kaga imanaya xaga beesha caalamka.
Waaban daalnee bal aanu kusoo afmeerarno dawaafkeenan wadanka Eretariya . Ereteriya waa dal yar oo ku yaala waqooyi bari Africa . Dadka ku nool waxa lagu cadadaa 4.5 million , qiyaas 50% ku dhaw dadka ku nool Eretariya waxa lagu qiyaasaa in ay yihiin dad muslim ah . Ereteriya waxay soo martay taariikh dhib badan , waxa lagu qiyaasaa 750,000 oo dad ahi inay ka barakaceen wadanka Ereteriya , tiro intaasi ku dhawna ay ku geeriyoodeen ka dib dagaalaadii 30 ka sano ka socday ee ay kula jireen Itoobiyada la dariska ah . Taasoo iclaamisay in Eretariya ay tahay wadan ka mid ah Itoobiya sanadkii 1962kii.
Inkastooy Ereteriya ay heshay madax banaanideeda sanadii 1993kii hadana maranka xuduudaha ayaa wali socda wadankuna wali ma dagana.
Dagaal joogta ah miinooyinka dhulka ku xabaalan iyo abaaro joogta ah ayaa curyaamiyay Ereteriya . Dadwaynuhu 2/3 waxay ku noolyihiin caawimaad iyo kaalmo si ay u noolaadaan . Qaar badan ayaa u cararay xeryaha qoxootiga Sudan , Kenya iyo Congo , qaarkoodna xaaladaas ayay ku nool yihiin ilaa mudo 30 sana ah.
Ereteriyaanka qaarkood aya Yurub iyo Waqooyiga America u yimid iyagoo qayb ka ah barnaamujka binu aadanimada ee qaramada midoobay .
Qoxootiga Ereteriyaanka ah ee soo gala wadamadan aan soo sheegnay , waxay uga soo barakaceen wadankoodii , qoyskoodii , luuqadoodii iyo dhaqankoodii iyagoo raadinaaya si ay u helaan nolol ka wanaagsan tan ay ku jiraan. Qaar kood ayaa soomaray dhibaatooyin adag , baahi iyo cabsi , mudo dheerna ku jiray dil iyo jaah wareer .
Xaga dublamaasiada Ereteriya waxa lagu tilmaamaa in ay tahay “Dhulux” ka dhex baxay geeska Africa , oo aan la aqoon wax ay rabto iyo wax ay diidantahay . Taasina waxa sobob looga dhigaa maamulka dhiig yacabka ah ee ka taliya dalkaas , bidayna in ay noqoto Eretariya meel go doon ka ah dunida inteeda kale . Sidoo kale maamulka ka taliya Ereteriya waa mid ku caanbaxay khalkhalinta iyo fawda ka abuurka Geeska Africa , waa maamul ay ka go antahay in aan marnaba Geeska Africa nabadi ka dhicin . Waa maamul ku caana maalay Xasaradaynta iyo xod xodoshada dariskiisa.
Xukuumada Eretariya waxay waligeedba ka shaqaynaysay in dirirta u dhaxaysa iyaa iyo Itoobiya in loo raro Somalia ama Somaliland (proxy war ) . Waxayna u muuqataa inay dabinkaasi ku guulaysatay ilaa xad . Faragalinta Eretariya waxay si toosa u bilaabantay sanadii 1997 markay Xuseen caydiid maraakiib hub iyo saanad milatari saarantahay intay usoo dirtay ay soo daba dhigtay xoogahaa jabhad Oromada itoobiya ah , taasina waxa ka dhalatay cawaaqib xumadii ahayd in ay Itoobiya qabsato saldhigii SNA ay ku lahayd baydhabo ayna hubayso maleeshiyaadkii ka soo hor jeeday SNA ee Digil iyo Midhifla.
Ugu danbayntii waxaan soconaa sadarkii ugu danbeeyay maqaalkeenee , waxa aan shaki ku jirin in cadhadan ururtay iyo masayrkan dawlada Ereteriya eek u aadan Somali land uu ka dhashay xidhiidhka wanaagsan ee Somaliland ay laleedahay wadamada dariskeeda.
This entry was posted on June 24, 2009 at 11:00 am	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.